Dheeraynta sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ee ku salaysan qof magangelyo u baahan - Migrationsverket
/ Dheeraynta oggolaanshaha
Dheeraynta sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ee ku salaysan qof magangelyo u baahan
Förlänga ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov – somaliska
Marka uu dhammaado wakhtigii ku meelgaarka ahaa ee sharciga deggenaanshahaagu waxaad haystaa fursad aad ku codsato inaad markale dheeraysato. Waa laguu dheeraynayaa sharciga deggenaanshaha haddii aad weli u baahan tahay in nabadgelyo lagu siiyo.
Xaaladaha qaarkood waxa kale oo lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha haddii aad haysato sababo kale oo aad Iswiidhan ku joogi kartid.
Wakhtig ku meelgaar ah ama sharci deggenaansho joogto ah
Haddii aad weli u baahan tahay in nabadgelyo lagu siiyo waxa laguu sii dheeraynayaa sharcigaagii deggenaanshaha ahaa.
Shaqaale ama shirkad aad adigu leedahay
Haddii aad tusto inaad tahay qof masruufkiisa la soo baxa oo shaqaysta ama aad adigu shirkad leedahay waxa markaa lagu siinayaa sharci deggenaansho joogto ah.
Ka akhriso warbixin intaa dheer sharciga deggenaanshaha joogta ah ee khuseeya qofka shaqeeya ama qofka isagu shirkad samaysta
Sharciga deggenaanshaha ee ku saabsan waxbarashada dugsiga sare
Haddii aad ku jirto waxbarashada dugsiga sare oo ay da’daadu u dhaxayso 17 ilaa iyo 24 jir waxaad xaaladaha qaarkood haysataa fursad laguugu dheeraynkaro sharcigaagii ku meelgaarka ahaa ee aad haysatay si aad waxbarashadaada u dhammaystirato. Taasi waxay khusaysaa qofka ku jira ee dhigta dugsiga sare, dugsiga sare ee ardayda caqliga dhimani dhigtaan ama waxbarsho u dhiganta dugsiyada la seexdo ee dadka waaweyn ama dugsiyada degmooyinka ee dadka waaweyni dhigtaan (komvux).
In laguu dheereeyo sharciga oggolaanshaha waxay ku xidhan tahay inta waxbarashada kaaga hadhay. Si sharciga laguu siiyo waxa khasab kugu ah inaad si joogto ah u búuxiso shuruudaha waxbarashada lagaaga baahan yahay.Taas macnaheedu waxa weeye inaad sanadwalba Hay’adda laanta socdaalka u geyso waraaqahaagii aad iskuulka ku dhigaynaysay
Marka aad dugsiga sare dhammaysato waxaad codsankartaa sharciga deggenaanshaha joogtada ah haddii aad adigu masruufkaaga la soo baxayso.
Ka akhriso warbixin intaa dheer oo khusaysa sharciga deggenaanshaha ee waxbarashada dugsiga sare qofka da’diisu u dhaxayso 17 ilaa iyo 24 jir (oo af-ingiriis)
Qof ay qaraabo wadanka Iswiidhan u joogto
Haddii aad la deggen oo aad is-qabtaan qof haysta dhalashada iswiidhishka ama qof haysta sharicga deggenaanshaha joogtada waxaad helikartaa sharicaga deggenaansha adigoo ku heleya qofkaa aad is-qabtaan ee aad isla deggen tihiin awgeed. Haddii aad isla deggenaydeen qofkaas ugu yaraan laba sanadood waxaad markaa helikartaa sharciga deggenaanshaha joogtada ah, haddii kale waxa lagu siinayaa sharci ku meelgaar ah ilaa iyo laba sanadood gaaraya.
Ka akhriso warbixin dheeraada shuruudaha ku saabsan qofka sharciga lagu siinayo inay is-qabaan qof deggen wadanka Iswiidhan (oo af-ingiriis)
Waxa jira xaalado gaar ah oo ka reebitaan leh in qofka loo dheereeyo sharciga deggenaanshaha qofkaas oo ay haysato duruufo aad u adag ama mid gaar ahba waaxana arrintaasi ka hor imankartaa heshiiskii ay iswiidhishku ballanqaadeen in qofka dhibaatadaasi haysato aan la masaafurin..
Codso intaanu sharciga deggenaanshuhu kaa dhicin
Waa muhiim inaad adigu codsato si aad u dheeraysato sharcigaaga ku meelgaarka ah ee aad haysato intaanu kaa dhicin, laakiin ha codsanin sadex bilood horteed. Haddii aanad sharcigu inta aanu kaa dhicin kahor aanad dheeraysanin markaa ma shaqaynkartid inta aad go’aanka sugayso waxaanad halkaa ku waayikartaa dheefooyinka qaarkood, tusaale kaalmada dhaqaale ee dib u dejinta, deeqda waxbarashada ama lacagta gunnada waalidka.
Adiga ayaa shakhsiyan keenaya codsigaaga
Si aad u codsato in laguu dheereeyo sharcigaaga waa inaad adigu shakhsiyan timaado Hay’adda laanta socdaalka. Cidkasta oo faamliga ka mid ah oo codsanaysa in sharciga loo dheereeyo waa inay yimaadaan Hay’adda laanta socdaalka. Carruurta aanay waalidkood joogin ee loo qabto qof ka mas’uula qofkaas ayaa soo raacaya markay sharciga dheeraysanayaan.
Ka akhriso meesha aad codsiga keenayso ee aad naga Heleyso annaga (waa ingiriisi iyo iswiidhish keliya)
Wakhtiga ballanso marka aad sharciga dheeraysanayso (waa ingiriisi iyo iswiidhish keliya)
Buuxi foomka codsiga
Waxaad buuxinaysaa foomka (Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd) aad ku codsanayso in laguugu dheereeyo sharciga deggenaanshaha waxaanad u soo qaadataan foomkaas Hay’adda laanta socdaalka. Qofkasta oo qoyska ka mid ahi waa buuxiyo foom isaga u gooni ah. Waxa xitaa ku jira dadka qoyska ka mid ah ee Iswiidhan yimi kuwaas oo aad adigu soo dalbatay maadaama adiga sharciga lagugu siiyey magangelyodoonimo.
Haddii aad doonayso inaad codsato sharciga deggenaanshaha joogtada ah oo aad shaqayso ama shirkad leedahay waxaad markaa foomka ku buuxinaysaa (Uppgifter om försörjning) Macluumaad ku saabsan masruufka
Haddii aad doonayso inaad codsato sharciga deggenaanshaha kaas oo khuseeya inaad la deggenaato qof aad is-qabtaan oo Iswiidhan deggen waa inuu markaa qofkaasi buuxiyo su’aalaha foomka ku qoran (Frågeformulär om förhållande)
Underlag för ansökan om förlängning av uppehållstillstånd blankett nummer 200011 (waa iswiidhish keliya)
Uppgifter om försörjning, blankett nummer 202011 (waa iswiidhish keliya)
Frågeformulär om förhållande, blankett nummer 204011 (waa iswiidhish keliya)
Maxaad soo qaadanaysaa markaad adigu codsiga samaynaysid
Soo qaado kaarkaaga sharciga deggenaanshaha marka aad codsiga samaynaysid. Haddii aad haysato wax waraaqo ah oo aqoonsiya waad soo qaadanaysaa, xitaa haddii aad Hay’adda laanta socdaalka hore u tustay.
Foomamka iyo waraaqaha ay su’aaluhu ku qoran yihiin waxa ku qoran dukumentiyada lagaaga baahan yahay inaad soo qaadato. Si taxadirleh u akhri foomamka.
Haddii aad adigu hayso warbixin cusub
Haddii aad weli u baahan tahay in magangelyo lagu siiyo waxaad arrintaa u sheegaysaa marka aad sharciga dheeraysanayso. Haddii ay wax cusubi kugu soo kordheen iyadana waad sheegaysaa.
Haddii aad haysato baasaboor cusub ama waraaqo aqoonsi ah, ama aad hayso dukumentiyo caddaynaya oo xoojinaya waxa cusub ee kugu soo kordhay waad soo qaadanaysaa marka aad sharciga dheeraysanayso.
Sawirka iyo faraha qofka laga qaado
Marka aad sharciga sheeraysanayso waa lagu sawiridoonaa markale waxana lagaa qaadayaa faraha. Sawirka iyo faraha cusub ee lagaa qaaday waxa lagu isticmaalayaa kaarka cusub ee laguu samaynayo ee sharciga deggenaanshaha haddii markaa sharci cusub lagu siiyo. Carruurta ay da’doodu ka yartahay lix sannadood uma baahna in faraha laga qaado.